Dhallaan loo masaafurinayo waddan aanu garanayn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Babak Parham / Sveriges Radio
Dhallaan loo masaafurinayo waddan aanu garanayn
Amir:"Waddan aan garaneeyn kuma laaban karo"
La daabacay tisdag 29 november 2016 kl 07.00
Ninkan oo aanu Amir ugu magacaabnay ayaa kelinimo ku yimid Iswiidhan. Hadda wuxuu sugaya in Afqaanistaan loo masaafuriyo. Waddan aanu garanayn. Amir ayaa ku soo koray Iraan. Maqal wareeysi ay Raadiyaha Iswiidhan la yeelatay inankan oo hadda musqul ku nool.
–Waxaan halkan hurday 20 casho. Wey igu adagtahay in aan halkan joogo ayuu sheegay ninkan oo aan ugu magacaabnay Amir. Islamarkaas ayuu weriyaheena tusaya kaynta uu saddexdii todobaad ee ugu dambeeyay deganaa.
–Markii aan diidmadii saddexaad aan ka helay heeyada socdaalka ayaan niyad-jabay. Waxaa liga qaaday LMA kaardhkeeyga, kaadhka aqoonsiga ah ee la siiyo qaxootiga. Ka dib na waxaa liga jaray lacagtii li siin jiray marka wexey noqotay in aan kaynta hurdo u raadsado, ayuu sheegay.
Ninkan oo aanu Amir u bixinay ayaa degan magaalo ka mid ah Iswiidhan. Dhowaan ayuu gaadhay da´da 18 jir.
Sharciga cusub ay dawladdu soo deejisay xagaagi ina soo dhaafay ayaa muujinaya in qaxootiga diidmada helay xaq u lahin kaalmada dhaqaale iyo kaadhka LMA ee ay heeyada socdaalku bixiso.
– Ma seexan karo, sidaan u soo jeedo ayuu waagu igu beryaa ayuu sheegay Amir.
Hasayeeshe ayuu ka baqday kaynta maadama dhowaan lugu hanjabay halkaas.
–Inta lii yimid ayaa ligu yidhi meeshan ka bax. Ajaanib ayaad tahay ku noqo waddankii aad ka timid. Waan baqay, ayuu sheegay.
Ka dib dhacdodaas ayuu Amir go´aansaday in u kaynta iskaga tago. Hadda musqul ayuu ku noolyahay.
-Waatan musqushii aan u soo guuray. Halkan qaboow maaha sidii kayntii aan ku noolan jiray. Xitaa teleefankeeyga ayaan ku buuxsan kara halkan.
Amir ayaa ku dhashay waddanka Iraan. Qoysiiska ayaa sabool ah. Wuxuu ku soo koray tuulo ka baxsan Teheran. Hasayeeshe ayaan weligiis la siin kaadhka aqoonsiga ah ee waddankaas.
-Habeenkii sidaan u wareegayo ayey subaxnimo gaadha, Waxaan ku fekera hooyadeey iyo walaaleheey, ayuu sheegay.
Amir ayaa diidmo ka helay heeyada socdaalka. Wuxuu hadda sugaya in waddanka laga masaafuriyo oo Afqaanistaan lugu celiyo. Waddan aanu weligiis tagin.
-Kuma laaban karo waddan aan garaneeyn. Hadii la celinayo Iraan ha ligu celiyo. Hasayeeshe waxaan maqlay in aaney Iraan doonayn in ay i qaabisho, ayuu sheegay Amir.
Wuxuu hadd iyo jeer ku fekera saxibkiis oo dhowr bilood ka hor is dilay. Weli wey ku adagtahay in uu ka hadlo saaxiibkiis.
–Xidhiidh waanagsan ayaan laheeyn markuu noola. Waan u qaadan kari waayey in uu is dilay. Islamarkiiba waxaan u orday gurigii uu degana. Waxaan is weeydiiya sababta uu isugu dilay, ayuu sheegay.
Halkuu mustaqbalka joogi doono ma oga Amir, hasayeeshe wuxuu hubaa in Afqaanistaan lugu celin karin.